သြဂုတ်လ 2017 |3၏စာမျက်နှာ 73 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 3)
လစဉ်မော်ကွန်း: သြဂုတ်လ 2017
Elinchrom နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းကြေညာ Rotolight
Pinewood Studios က, လန်ဒန်, 31st သြဂုတ်လ 2017: Rotolight တစ်ခုဆုရဗြိတိန်နဲ့ LED အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူ, Neo နဲ့စတင်ပြီး၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးက၎င်း၏ထူးခြားသော Skyport ပရိုတိုကောပေါင်းစပ်ဖို့, Elinchrom နှင့်အတူကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလူသိများဓာတ်ပုံပြပွဲအလင်းရောင်စနစ်များကိုထုတ်လုပ်သူတဦးဖွင့်ပူးပေါင်းထားပါတယ် စက်တင်ဘာလ 2th အပေါ်အဓိကပစ်လွှတ် event မှာမိတ်ဆက်ပြသခံရဖို့4။ Rotolight ယင်း၏ပေါင်းစည်းဖို့ Elinchrom နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပါတယ် ...
Weybridge, ဗြိတိန်နှင့် Broomfield, CO, အမေရိကန်, သြဂုတ် 31st, 2017 - ။ "IP ကိုကျော်ဗီဒီယိုအကြောင်းကိုဤမျှလောက်ဆွေးနွေးမှု SDI အခြေခံအဆောက်အအုံအစားထိုးနှင့်အတူ, အချို့ IP ကိုကျော်ဗီဒီယိုမဆိုအသံလွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့ရှေ့ဆက်လမ်းကိုသောစှဲရအံ့သောငှါအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ '' box ကိုပြင်ပမှာ '' ကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, အစဉ်အမြဲကောင်းတစ်ဦးအရာမဟုတျပါဘူး ...
Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ '' Uplynk ဗီဒီယိုလွှဝန်ဆောင်မှုယခုအားကစားကွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်အဘို့အခွင့်အာဏာ OTT - ကနေဒါရဲ့ဦးဆောင်ပန်ကာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပလက်ဖောင်းပံ့ပိုးပေး
Los Angeles (သြဂုတ်လ 31, 2017) - တစ်ဦးတည်းပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်သစ္စာရှိမှုနှင့်ပန်ကာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပလက်ဖောင်း - Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ, ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယနေ့ယင်း၏ Uplynk ဗီဒီယိုလွှဝန်ဆောင်မှုကနေဒါအားကစားနည်းပညာခေါင်းဆောင်အားကစားကွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ All Access ပလက်ဖောင်းသို့ပေါင်းစည်းထားပြီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် VOD အားကစားဖြစ်ရပ်များ, ဂိမ်းနေ့ကပျေါလှငျနှင့်အခြား On-demand အကြောင်းအရာ၏ streaming များထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့် ...
Dalet IBC2017 မှာ၎င်း၏အသစ်စက်စက်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် Dalet Cube ကိုအသံလွှင့်ဂရစ်ဖစ် Package ကိုဖော်ပြမှ
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 31, 2017 - Dalet က၎င်း၏ Dalet Cube ကိုထုတ်လွှင့် 3D ဂရပ်ဖစ် suite ကိုမှသိမ်းကျုံး updates များကိုဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Dalet Cube, ဒီဇိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုထုတ်လွှင့် 3D ကာတွန်းဂရပ်ဖစ်မှ၎င်း module တစ်ခုပြည့်စုံ suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Native အဆိုပါ Dalet က Galaxy မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) & orchestral ပလက်ဖောင်းနှင့် Dalet Unified သတင်းစစ်ဆင်ရေး၏အဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှချိတ်ဆက် ...
Consolidated ဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဆက် VEMOX Viaccess-Orcas အားဖြင့် Powered, OTT Multiscreen ဝန်ဆောင်မှုလျာထားသော
ပဲရစ် - သြဂုတ်လ 31, 2017 - Viaccess-Orcas တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ OTT နှင့်တီဗီပလက်ဖောင်းပေးခေါင်းဆောင်, content တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အဆင့်မြင့်ဒေတာဖြေရှင်းနည်းများ, (မြောက်အမေရိကအော်ပရေတာ Consolidated ဆက်သွယ်ရေး Olympusat ရဲ့ VEMOX အသုံးပြု. ၎င်း၏ခြေရာကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထား OTT ဖြေရာယဇ်စတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Viaccess-Orcas စွမ်းအားဖြင့် TM) ဝန်ဆောင်မှု။ Olympusat အကြောင်းအရာပြင်ဆင်မှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူနေရာတိုင်းမှာဖြေရှင်းချက် Viaccess-Orcas ရဲ့တီဗီ Bundling, VEMOX နှင့်အတူ Consolidated ဆက်သွယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး ...
Sonoris များအတွက်စံချိန်တင်၏အေဂျင်စီ Named က Wall Street ဆက်သွယ်ရေး
SALT LAKE CITY - သြဂုတ်လ 31, 2017 - အသံ-အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ Sonoris အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်စံချိန်၎င်း၏အေဂျင်စီအဖြစ်က Wall Street ဆက်သွယ်ရေးကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ သဘောတူညီချက်အရ, Wall Street ကဆက်သွယ်ရေး, သတင်းကြေညာချက်များနှင့်အတူ Sonoris ကူညီရန်ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်ကူညီဖို့ဆောင်းပါးများ, ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများ, နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ Sonoris High-end အသံထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုး ...
မွန်ရိုး Electronics နှင့် Layer Solutions ပို. ကျယ်ပြန်နာဂအရေးပေါ် Messaging ကိုများအတွက်တပ်ဖွဲ့ကို Join
LYNDONVILLE, နယူးယော့ - သြဂုတ်လ 30, 2017 - မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ်နှင့်၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များလက်အောက်ခံ, ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးဘို့အအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များယနေ့အလွှာ Solutions Inc ကို Layer Solutions ပညာရေးကိုထောက်ပံ့အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်အတူနည်းပညာပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ , ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ၎င်းတို့၏အရေးပေါ်အတွက်စီးပွားဖြစ်, စက်မှု, နှင့်အစိုးရအဆောက်အဦများနှင့်ဒြပ်ထု-အကြောင်းကြားစာဆက်သွယ်ရေးင်း၏ထူးခြားသော software များမှတစ်ဆင့်နှင့် ...
က Ultra-Flexible, IBC2017 မှာ Multi-Channel ကို HDMI Input အား-Output Card ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ Magewell
ကုမ္ပဏီ၏အစွမ်းထက်သစ်ကို Flex ကို I / O မိသားစုထူးချွန် I / O သိပ်သည်းဆ, စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဘက်စုံသြဂုတ်လ 31, 2017 ကမ်းလှမ်းအတွက် SDI configuration ကိုပူးပေါင်းမည်အတွက် * ဒုတိယအမော်ဒယ် - နန်ကျင်း, တရုတ်: အ IBC2017 ပြပွဲမှာအမ်စတာဒမ်အတွက်လာမည့်လတွင်, Magewell - တစ်ဆုရ ဆန်းသစ်သောဗီဒီယို interface ကို devices များဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ - ကို Flex ကို I / O HDMI 4i2o, ကုမ္ပဏီအသစ်အတွက်ဒုတိယကဒ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 73«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»